Malunga nathi - Changlin Industrials Co., Ltd.
I-Changlin igubungela indawo engaphezulu kwe-17000 yeemitha zesikwere kwaye inezixhobo ezininzi zobuchwephesha, iqela labayili abanamava kunye nabasebenzi abangaphezu kwe-150 abanobuchule. Sineemigca emibini ephambili yemveliso: umgca wokuthungwa kweebhegi kunye neebhegi zetywina lobushushu. Umthamo wethu weengxowa zenyanga zizigidi ezili-1, zithunyelwa eYurophu, emantla eMelika, eMzantsi Melika, eAustralia, eAsia pacific, kuMbindi Mpuma ……
Ngomoya "wokuzinikezela, ukuvelisa izinto ezintsha, ukusebenzisana, ukusebenza nzima" kunye nesitayile somsebenzi wokuba "ngocikizeko, onobuchule, onxibelelana, oqaqambileyo", bonke abasebenzi banikezela abathengi abadala nabatsha ngeemveliso ezilungileyo kunye nenkonzo. Ngokusekwe kumava ethu apheleleyo kwiminyaka engama-20 kokubini ukuwelda kunye nokuthunga ubuchwephesha, sidlulisile isatifikethi se-ISO9001, sinengxelo yoPhicotho-zincwadi ye-SA8000, SEDEX, L'Oréal, LVMH, kwaye sihlala sikhula kunye neempawu ezinkulu kakhulu , njengasezantsi: L'OREAL （Kubandakanywa kodwa kungaphelelanga kwi-YSL, HR, LANCOME, VICHY, LA ROCHE-POSAY, Kiehl's)，I-LVMH ing Kubandakanya kodwa kungaphelelanga kwi-BVLGARI, eGivenchy, e-GUERLAIN, e-SEPHORA, kwiZibonelelo 、 EBURBERRY 、 ESTEE LAUDER (kubandakanya kodwa kungaphelelanga kwi-LA MER, Jo Malone London, CLINIQUE, Bobbi Brown, MAC) IS SISLEY 、 L'OCCITANE 、 UNILEVER, P & G, ISDIN, NUXE, LACOSTE, njl.
Ngombono wophuhliso oluzinzileyo, ngoku izinto ezingakumbi zokusingqongileyo zisetyenzisiwe kuluhlu olubanzi apha: I-organic okanye umqhaphu wendalo kunye nelineni ziqhelekile kuyo yonke indawo, iRPET Material isendleleni, ngelixa i-ECD e-Recycled okanye i-Recycled TPU izakuba umkhwa omtsha. Izinto ezintsha zefayibha zezityalo ezifana nelinanapple nelaphu lebhanana ziyaphuhliswa kwaye ziyasetyenziswa. U-Changlin uzibophelele ekuphuhliseni iimveliso zokhuselo lokusingqongileyo, kwaye enegalelo kumandla ethu kukhuseleko lokusingqongileyo emhlabeni.
Sinike uyilo lwakho, siyenza inyani!
Siyakuqinisekisa ukuba i-Changlin iya kuba lelinye lamaqabane akho athenjiweyo kunye nabanobuchule bokuthenga!
Yinto umnqweno wethu ukuba unibonelele ngeemveliso eziphambili kunye nenkonzo ezigqwesileyo, kwaye mveliso ngokufudumeleyo ukwamkela OEM / ODM.
silupasile uphicotho lwe-L'Oréal, LVMH, SEDEX 4 intsika, sinesatifikethi se-ISO9001 kunye ne-SA8000